Thursday July 04, 2019 - 09:23:37 in Wararka by Super Admin
Zuheyrah Wassiim oo caan ka ah Hindiya iyo wadamada dariska la ah laguna yaqiinay jilista Filimada iyo duubista heesaha ayaa qaadatay go'aan lama filaan ah oo ka yaabiyay caalamka Fisqiga iyo xumaanta ku caanbaxay, Zuheyrah ayaa barteeda Facebook-ga ku sheegtay in ay Alle utowbad keentay ayna go'aansatay in ay isaga tagto Jilista Filimada.
Go'aanka Gabadhan muslimadda ah ayaa ka caraysiiyay mas'uuliyiinta shirkadda Filimada soo saarta ee loo yaqaan Bollywood.
"Majaalka shaqada Fanka wuxuu isiiyay taageero badan iyo Jaceyl laakin wuxuu igu hoggaaminayaa dariiqa baadida sida haddii aan ka tago iimaankayga anigoo si aamusnaan ah u ga tagaya diintayda. Intii aan sii waday in aan ku shaqeeyo jawi khilaafsan iimaanka, xiriirkeygii fanka wuxuu ahaa mid halis ku ah diinteyda " ayay tiri Zuheyra Wasiim.
Warbaahinta ugu caansan wadanka Hindiya sida Telefeshinnada iyo Wargeysyada ayaa go'aanka ay qaadatay gabadhan muslimadda ah ku tilmaamay mid musiibo ku ah Bollywood waxayna ugu baaqeen in ay wax ka bedesho tallaabada ay qaadatay.
Mas'uul u hadlay shirkadda Bollywood ayaa sheegay in ay ka xumaadeen in Fanka ay ka baxday haweenaydan muslimadda ah oo dhankeeda ku adkeysatay in aysan dib ugu laaban doonin Jilidda Filimada waxayna ballan qaaday in ay ku dheganaan doonto diinta islaamka.
Inkabadan 17 kun oo qof ayaa baraha bulshada Ra'yigooda uga dhiibtay tallaabad ay qaadatay Zuheyrah Wasiim oo ah muslimad kasoo jeeda gobolka Kashmiir ee ku jira gumeysiga Hindiya halka 13 kun oo kale ay dib ufaafiyeen qoraalka ay ku shaacisay in ay ku Towbadkeentay.
Qaar badan oo kamid ah fanaaniinta gaalada Hidniya ayaa durbadiiba haweenaydan Towbadkeentay ku sifeeyay Xagjirad balse kumanaan kun muslimiin ah ayaa ku dhiiri geliyay go'aankeeda waxaana kamid ahaa daaciga reer Hindiya ee Axmed Qaasimi kaasi oo bayaaniyay in ay xaaraam tahay in dumarka muslimaadka ah ay fanka galaan ayna ka qeyb qaataan jilidda filimada.